Septambra 2019 - Manompo ny Tompo amin'ny fahamasinana - FJKM Québec - Canada
Home > Éditorial > View Post
Septambra 2019 – Manompo ny Tompo amin’ny fahamasinana
3 septembre 2019 by Njaka Ramanandafy
EDITORIALY septambra 2019
Ry havana malala!
Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.
“Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana”
“… mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom. 6: 13.
Ny voambolana hoe “masina” dia mifamatotra amin’ny hoe “hatokana”. Raha masina Andriamanitra dia tena mitokana tsy mifangaro ary tsy hafangaro amin-javatra hafa Izy satria masina. Toy izany ihany koa, ny mpivady nandray ny tsodrano fanamasinana ny fanambadiany, teo anatrehan’Andriamanitra, dia miezaka manokana izany fanambadiany izany ho azy roa irery sy ny zanany, fa tsy hafangarony amin’ny hafa satria masina ihany koa ny fanambadiana.
Koa raha taomina hanompo amin’ny fahamasinana isika dia entanina mba hanokana ny fanompoantsika tsy hifangaroharo amin-javatra hafa. Ary satria ny zavatra hatokana dia heverina ho manan-danja tokoa dia:
Aoka tsy haroharohina amin’ny hafa ny fanompoantsika ny Tompo fa tena hitokana mihintsy.
Ataontsika ho zava-dehibe ny fanompoana Azy ka ho mahasaro-piaro sy hitandrinaizany isika mba ho sarobidy tokoa izany eo imasontsika.
Mba hanao ny tsara hatrany no tanjon’ny fanompoantsika Azy ka hitondra vokatra tsara isika amin’ny atao rehetra.
Ho feno ny fahamasinana avokoa ny momba antsika rehetra “fo, saina ary fanahy” mba tsy handiso fanantenana ny Tompo ny niantso antsika ho mpanompony. Ny asa masina mantsy dia mitaky fahamasinana ho an’izay manatanteraka azy ihany koa araka ny voalaza hoe “Ho masina ianareo, satria masina Aho” I Pet. 1: 16.
Koa inoana fa omen’ny Tompo antsika rehetra indray ny fanahiny, amin’ity volana septambra 2019 ity, mba hanamasinantsika ny tenantsika sy ny fanompoantsika rehetra.
Ho tanteraka amintsika rehetra anie ity tenin’Andriamanitra ity: “Atolory ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom 6: 19.
Mifampivavaka isika mba ho volana hanehoantsika fahamasinana ho amin’ny asa fanompoana ny Tompo anie ity volana nomeny antsika ity.
Posted in Éditorial, Uncategorized
Tagged with Éditorial
Select One dorkasy Éditorial Fifohazana Foibe Katekomena Madagascar Mana Mofon’aina Perikopa Sekoly Alahady SLK STK Vaovao
Hetsika ho avy
Liana Vaovao / Mofonaina
Adresse de messagerie	 Fanampin'anarana - Prénom	 Anarana - Nom	 Téléphone
Église St Andrew’s 106, rue Sainte-Anne Québec, Québec (Québec) G1R 3X8, CANADA
Copyright © 2021 FJKM Québec - Canada. Powered by churchthemes.com.